Etu ị ga - esi nweta akwa mmanụ dị mkpa na akwa - Essential Oils Bulk | AromaEasy
Etu ị ga - esi nweta akwa mmanụ dị mkpa
Ihe na Nwere ike 14, 2020 Nwere ike 14, 2020 by Matt
Mara otu esi enweta akwa dị mkpa na akwa nwere ike ịbụ ọdịiche dị n’ichekwa teepu ọcha kachasị amasị gị na ịnwe iziga ya na nsị. N’ezie anyi niile choro itinye mmanu di nkpa na uwe anyi bu ime ka uwe anyi na-adi uto ma nwee obi uto. Yabụ, kedu ihe anyị ga-eme ma anyị nwetachaa mmanụ n’elu akwa ndị anyị nwere mmasị na ya?
Etu aga m esi wepu ihe dị mkpa dị na akwa na akwa
Mpempe akwa ma ọ bụ akwa nhicha akwụkwọ
Ime mmiri soda (dabere n'otú unyi ahụ)
Ncha ncha erimeri nkịtị (mmiri ole na ole 1 teaspoon)
Mmanya (agwa ikuku oxygen)
1. Jiri akwa nhicha akwa kpuchie stains ya
Jiri akwa ma ọ bụ akwa nhicha akwụkwọ kpochapụ mmanụ dị ezigbo mkpa ọ bụla o kwere mee iji mee ka ihe dị ụkọ na-adịgide. Pịa nwayọ, emela ahụ, n'ihi na idecha akwụkwọ ga-enyere aka ịgbasa unyi ahụ.
Ọ bụrụ na ntụpọ mmanụ dị mkpa esetịpụla kpamkpam, ị nwere ike ịdafe nzọụkwụ a.
2. Tinye mmiri soda
Wụsa ntụ ịme achịcha ntụ ntụ n’elu akwa ahụ, wee jiri ya mee ihe nhicha ochie iji mee ka ọ banye ihe dị ka otu awa. Ngwakọta ahụ na-arụ ọrụ dị ka ihe na-anabata ihe, iji na-amịpụta mmanụ buru ibu na-etinye n'ime eriri ahụ, na-ahapụ mmanụ ahụ obere mmanụ maka usoro ndị ọzọ.
Oge ị ga - eme nke a, nsonaazụ kachasị mma nke ịnweta mmanụ dị mkpa. Nzọụkwụ a ga - enyere aka wepụta ụfọdụ mmanụ dị mkpa ma mee ka ọ dị mfe iwepu mmachi mmanụ. Ime soda ga-acha odo odo-agba aja aja mgbe ị risịrị mmanụ. Wepu iberibe ahihia ahụ jiri mma dị larịị ma ghaa usoro a ruo mgbe ntụ ntụ ahụ agaghịzi enweta unyi ahụ.
Cheta itinye mpempe kaadiboodu ma ọ bụ plastik n'etiti akwa ọ bụla, ka ị ghara ibugharị ntụpọ ahụ n'akụkụ nke ọzọ.
3. Jiri ncha eji ehicha ihe dị ọcha
Tinye akwa ncha ozugbo na unyi ahụ, wee jiri obere mmiri were mmerụ ahụ wee ruo mgbe ọ mepụtara mkpuchi yiri nke ahụ. Jiri akwa nhicha ochie iji rụọ ụfụfụ ahụ banye n'ime akwa ahụ. Ọ kachasị mma ịrụ ọrụ site n'akụkụ nke ọzọ ruo na ntụpọ (ma ọ bụ n'azụ akwa), yabụ anyị nwere ike igbochi ịkwanye ntụpọ ahụ ọzọ na uwe.
4. Ghichaa akwa ya na usoro oku
I wepu mmanu mmanu n’uwe uwe o kwere mee, tinye ha n’ime igwe eji asa ahu ya na otite nhicha na okara nke mmanya di ocha. Jiri mmiri ọkụ sachaa akwa ahụ ebe ọ na - enyere aka agbaze ma gbazee mmanụ.
Nwere ike nweta mmanu oxygen n’uwe gi karie ma oburu na ichoro uzo siri ike.
Agbanyeghị, etinyela ya na nhicha ahụ ozugbo usoro ịsachachara. Mgbalị a nwere ike ịtọ ite mmanụ n’elu akwa ahụ, na-eme ka ọnya ahụ ghara ịpụ. Mgbe akpachara ikuku gachara, lelee ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla ọ bụla ọ ka dị. Ọ bụrụ otu a, kwugharị nzọụkwụ 4 ọzọ. Naanị mgbe ekwenyechara na ị wepụrụ mmanụ mmanụ kpamkpam, ị nwere ike ịga n'ihu na ọrụ ịchacha nkịtị.
Eucalyptus-Amiri Detergent Ekewa Na-Ekele karịa Iche
Iji mmanụ iji wepu mmanụ griiz nwere ike iyi ihe dị egwu ma, ọ na-arụ ọrụ n'ezie. Eucalyptus mkpa mmanụ dị mma na iwepu mmanụ mmanụ, gụnyere inyere gị aka iwepu mmanụ dị mkpa. Eucalyptus nwere cineol bara ọgaranya, ihe okike nke na-eme ka ihe mgbazelata agbaze. O siri ezigbo arụ ọrụ, arụmọrụ mmanụ a na-eme nke ọma ka nke ụfọdụ mmanụ na-ejikarị.
Enweghi ezigbo ihe dị mma karịa mmanụ mmanụ osisi eucalyptus maka mwepụ nke griiz na tar na uwe. Na agbanyeghị iji ya na-asacha uwe, Eucalyptus mmanụ bara ezigbo uru maka nrụzigharị ụgbọala na arịa ụlọ.
Mara: Stick to the eucalyptus oil nke kacha mma, dị ọcha, ma nwee ọtụtụ ihe na sinima iji hụ na ọ na-ewepu ihe eji eme ya mmanu.
Jiri mmanụ eucalyptus na nzọụkwụ 3: Tinye mmanụ ole mmiri dị mkpa eucalyptus na unyi ma chere nkeji 30. Mgbe ahụ jiri obere mmiri were sachaa unyi ahụ. Tinyegharịa usoro a ruo na unyi ahụ ga-apụ.
Mgbe ahụ, gaa na Stepkwụ na mentionedkwụ 4 dị ka m kwuru n’elu.
Chọta Ngwọta Siri Ike?
Practicalzọ ọzọ dị irè iji wepu ụdị mmanụ dị na uwe bụ iji 70% isopropyl mmanya. You nwere ike iji 90% na-a alcoholụ mmanya ma ọ bụ itinye uche ịchọrọ. Ma anyị ga-akwado 70% ị alcoholụ mmanya na-egbu egbu, n'ihi na ọ bụ nsonaazụ dị irè nke nwere ike ịdabere na anụ gị ahụ obere obere.
Were akwa a Soara mmanya Soụọ mmanya kwesịrị ekwesị, wee jiri nwayọ kpatụ unyi ahụ. Mee nke a oge ole na ole, ị ga-ahụkwa nsonaazụ a na-ahụ anya.
Maka nnukwu stains, ịnwere ike ịgbakwunye mmanya na-egbu egbu na karama ịgba wee fesaa ya na unyi ahụ ruo mgbe akwa ahụ na-adị. Alcoholụ mmanya na-egbu egbu chọrọ ihe dị ka otu awa ịbanye n'ime akwa ahụ ma wepụ nsị. Dị ka ọ na-adịkarị, ị ga-eme nke a ebe ikuku na-adị nke ọma iji zere ịbanye na vapo nke mmanya. Mgbe afọ ojuju maka nsonaazụ ya, were mmiri ọkụ sachaa uwe gị.
Nwere Ike Mpempe Egwuregwu Mkpịsị Mkpa? Na n'ụzọ?
Dịkwa ka mmanụ ndị ọzọ, mmanụ ndị dị mkpa nwere ike imerụ uwe anyị na akwa.
Mmanụ ndị dị mkpa na-adịghị emerụ ahụ ga-etolite ntụpọ pụtara ìhè mgbe ọ gbasara uwe gị. N'ime akwa a na-ejikarị, stains dị ka disloration ma ọ bụ faci gbara ọchịchịrị, nke yiri mmanụ a na-ete site na ụdị mmanụ ọ bụla ọzọ. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ụdị ụdị unyi kachasị njọ, patị ndị a na-adị njọ mgbe ụfọdụ ma dozie anya.
Fabfọdụ akwa, ọkachasị akwa sịntetik, na-emeghachi omume karịa mkpa mmanụ. Mpaghara ahụ emetụtara na-agbanwe ọdịdị ya na gbanwee ụcha kama ịmepụta patị mmanụ. Ọ dị nwute, ọ bụrụ na nke a mee, ọ nwere ike imebi akwa ahụ enweghị ike idozi ya. Anyị niile maara na mmanụ dị mkpa na-emebi plastik. N'ihi ya, anyị ekwesịghị ikwe ka mmanụ ndị dị mkpa iji mee ka ọ bụrụ ụdị plastik ọ bụla (gụnyere karama plastik). Ihe ndị sịntetik na-emekwa ka ọ ka njọ mgbe ha na mmanụ ndị dị mkpa. Yabụ, gbaa mbọ na-ekewapụ onwe ha na ibe ha oge niile.
Etu esi eji mmanụ mmanụ dị mkpa na akwa na-enweghị asacha ha?
Ọtụtụ ndị na-esi ísì ụtọ nwere ike ịdị mma ma sie ike, ebe ihe anyị chọrọ bụ isi na-atọ ụtọ. Mmanụ ndị dị mkpa bụ ihe ndị ọzọ dị mma na ahụike karịa mgbe anyị chọrọ isi onwe anyị.
Soro ntuziaka ndị a iji mee ka ahụ ruo gị ala mgbe ị na-erite uru nke mmanụ dị mkpa:
Naanị gwagbu mmanụ tupu iji ya, n'ụzọ dị mfe a, ị nwere ike zere isi ihe dị mkpa na akwa gị. Ihe a gwara ọgwara abụghị naanị na-eme ka ngwa dị mfe, kama ọ na-ebelata ihe ọghọm nke ịchọpụta anụ ahụ na mmanụ ndị dị mkpa.
Thezọ kachasị mma na nke kachasị dị mma bụ iji mkpa mmanụ diffuser. N'ụzọ dị otu a, can nwere ike ịsachasị uwe gị nke ọma n’enweghị nchekasị gbasara mmerụ mmanụ ma ọ bụ ị doụbiga ya ókè.
Yikwasị uwe mgbe mmanụ gachara mgbe ịhịa aka.
Zere itinye mmanụ ndị a dị mkpa na akwa gị:
Ala mmanụ Dị Mkpa
Ego Ole Di Mkpa Ka Itinye Ncha